တကယ်လုပ်ရင် အဟုပ်ဖြစ်ရမည်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » တကယ်လုပ်ရင် အဟုပ်ဖြစ်ရမည်။
Posted by ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း on Jun 23, 2011 in Community & Society, Society & Lifestyle |7comments
အတွေး အကြံအစည် အောင်မြင်မူ
ဒီပိုစ့်လေးကို မိမိလက်ရှိဘ၀နှင့် အခြေအနေလေးကို ဘ၀တူ သက်တူရွယ်တူ ညီအကိုမောင်နှမ ညီငယ်ညီမငယ်အားလုံးတွက်ရည်ရွယ်၍ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့သောဘ၀နှင့် အစိတ်အပိုင်းလေးတွေပါ။ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ဘ၀အတွက် ပုံသဏ္ဍန်မျိုးစုံနဲ့ ရုံးကန်နေကြတာပါ။ပညာတတ်သူ၊မတတ်သူ အားလုံးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ တူညီနေပါတယ်၊ပြည့်စုံသောဘ၀၊အောင်မြင်သောဘ၀တွေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတာပါပဲ။
ကျွန်တော်ဟာ လွန်ခဲ့သော (၁၅)နှစ်လောက်က ရေထဲမှာရှာလိုက် ကုန်းပေါ်ရောက်ရင်ကုန်သွားလိုက်နဲ့ လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတာပါပဲ။သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်ပါပဲ။ စုဆောင်းမိသလောက်လေးနဲ့ ကားဝယ်ရောင်းလည်းလုပ်ဖူးပါတယ်၊၂၀၀၂ အတွင်းလောက်ကပါ၊အရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်လည်း လုပ်ခဲ့ပါတယ်။သေသေချာချာ စုဆောင်းမိတာမရှိသလောက်ပါပဲ။အဲဒါနဲ့ မလေးကို ၂၀၀၆ခုနှစ်လောက်မှာ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်လောက်မှာကိုယ်ပိုင် စားသောက်ဆိုင်အသေးလေးကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။အစက သိပ်အစဉ်မပြေပေမယ့် တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့ တော်တော်အစဉ်ပြေလာပါတယ်။ယနေ့ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ပုံမှန် Rm.800-1000 အထိရလာပါတယ်။အဲဒါနဲ့ ငွေလေးနဲနဲစုဆောင်းမိပြီး နောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ရန်စဉ်းစားမိပါတယ်၊ဒါပေမယ့် အစရှာမရဖြစ်နေပါတယ်။တစ်နေ့ စာအုပ်ဆိုင်မှ ချမ်းသာဖေဖေနဲ့ဆင်းရဲဖေဖေ ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို အထပ်ထပ်အခါခါဖတ်မိပြီး၊
ခေါင်းထဲမှာလင်းကနဲ အကြံရသွားပါတယ်။ဟုပ်ပြီ..ငါတော့ လမ်းစရပြီ၊ ငါလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မူမှာ ရင်းမြှပ်နှံမူကိုစတင်ပါတော့တယ်။၂၀၀၉ ခုနှစ်လောက်မှာပါ၊ အရင်ဦးဆုံး မိမိနိုင်နင်းတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ စပါတယ်။ မြေကို ၃၅ သိန်းလောက်နဲ့စ၀ယ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက် အဆောက်အဦးကိုလည်းတက်နိုင်သလောက် အသေးလေးပဲလုပ်ပါတယ်။အဆောက်အဦးမပြီးခင်မှာတင် ကံတရားကပေးလာပါတော့တယ်၊တစ်နှစ်အတွင်း ဈေးတွေ အဆတစ်ရာလောက်ကိုထိုးတက်သွားပါတော့တယ်၊ယခု လက်ရှိပေါက်ဈေး သိန်း ၆၅၀ ကျော်သွားပါတယ်။ကဲ ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲ….ရှေ့သို့..ရှေ့သို့..ပေါ့..ဆက်လက်ပြီးချီတက်မယ်…..ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ တာက စာဖတ်ပြီး စာရေးသူရဲ့ ဆန္ဒကို သိရှိပြီး မိမိကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ အသုံးချတတ်မူပါ။
ကြွားဝါလိုသောဆန္ဒ လုံးဝမပါရှိပါ။မိမိတို့တတ်ကျွမ်းသည့် ပညာများနှင့် သူများချမ်းသာအောင်မစွမ်းဆောင်ပါနှင့်။မိမိ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်ချမ်းသာအောင်းစွမ်းဆောင်စေချင်ပါသည်။သူများဦးနှောက်ဖေါက်စားတာမခံပါနဲ့ ။မိမိအရည်အသွေး၊မိမိအရည်အချင်းသည် မိမိဘ၀အတွက်ဖြစ်ပါစေ။
ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရန် မိမကိုယ်တိုင်သာဖြစ်ပါသည်။ချမ်းသာရန် ကြီးပွါးရန် စာအုပ်ဖတ်ပြီး လေထဲမှာတိုက်ဆောက်နေရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာနိုင်ပါ။လက်ရှိ ကျွန်တော့် အနီးအနားမှာရှိသော ညီငယ်ညီမငယ်များကိုလည်း လက်တွဲခေါ်ယူလမ်းပြပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
အချိန်ရွေးမနေပါနဲ့ လုပ်နိုင်တာကို ယခုပင်စတင်လိုက်ပါ။
အခုတော. ကိုယ်.ဖာသာ ဝေးသင်တက်ရင်းအလုပ်လုပ်ရင်း နဲ.လုပ်နေရပါတယ်
အစ်ကိုပြောသလို ရည်မှန်းချက်ကတော. ရှိပါတယ် ကျောင်းပြီးတာနဲ. ကိုယ်ပိုင်လုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ
ကြိုးစားပါ ညီငယ်ရွေဘိုသား၊ရည်မှန်းချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်ရန် ရိုးသားမူနဲ့အရင်းတည် ကြိုးစားမူနဲ့ဆောင်ရွက်ပါ။အောင်မြင်မူများပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
ဆင်းရဲ ဖေဖေ ချမ်းသာဖေဖေကို ကျွန်တော် လဲ ဖတ်ဖူးပါတယ်…. လောလော ဆယ် ကိုယ်ပိုင် အလုပ်စဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်… အစ်ကို့ ကို ဘယ်လို ဆက်သွယ် ရမလဲ ပြောပြ ပေးပါလား… ကျေးဇူးတင်လျှက်
Endless; ရေ G mail လိပ်စာ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ minmaung9@gmail.com ကနေဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။
အခွန်ရုံးကဆက်သွယ်ချင်ရင် ဦးဇော်မင်းကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲတဲ့။
ဒါကတော့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် အပေါ်မှာ မူတည်နေသလို ကံတရားလည်းပါပါတယ်။ နေ့ခြင်းညခြင်း လုပ်ငန်း ၂ခုလုံး ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းရှိလို့ပါ။
ဘာသာပြန်စာအုပ်လေးပါ။ ဖတ်ပြီး လိုက်နာ နိုင်ရင် အတော်ကောင်းမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ကံတရားကြောင့် ဘယ်လောက် အားကုန် ကြိုးစားလည်း ရသင့်သလောက် မရသူတွေ၊ မအောင်မြင်သူတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ တခါတခါတော့ ကံတရားဟာ အတော်ဆန်းကြယ် ပါတယ်။